Siyakwamukela ku-Ylang Ylang Residence
(128 okushiwo abanye)
Saint Pierre , Saint-Pierre, i-Réunion
Uyemukelwa endaweni ehlala i-Ylang Ylang endaweni ejabulisayo, ekhanyayo ne-cocooning T2 ekunikeza ithala elihle elinombono omangalisayo nomangalisayo we-Indian Ocean kanye nezintaba ze-Reunion.
Yonke into ingaphakathi kwebanga lokuhamba ukuze uhlale kamnandi futhi kulula.
Igumbi elikhulu lenzelwe ukuthi ungaphuthelwa lutho, futhi ngikunikeza imitshingo ye-champagne yokushona kwelanga noma nabangane.
I-T2 entsha enhle nefudumele engama-40 m2, ihlome ngokuphelele futhi inesiphephetha-moya, itholakala endaweni efanele ukuhamba imizuzu embalwa ukusuka ogwini oluncane oluthulile lwe-Holy Land, ulwandle olujabulisayo lwe-St Pierre nechweba lalo elihle, izindawo zokudlela kanye nemigoqo kanye nesikhungo. idolobha elinezitolo eziningi kanye nemakethe yalo encane ehlala njalo.
Emasangweni aseningizimu yasendle uzobe useduze nezindawo eziningi zokuhamba izintaba kanye nentaba-mlilo.
Ifulethi lizokunikeza umbono oyinhlanhla walo lonke ugu lwaseSaint Pierre kanye nentaba engemuva.
Ungadla isidlo sasekuseni kuthala elibheke e-Indian Ocean futhi ujabulele ukushona kwelanga okuhle ngenkathi wabelana nge-aperitif enobungane.
Amavayibhu amahle akulindile endaweni yokuhlala yaseYlang Ylang ukuze uhlale kahle.
Ukubukeka kwendawo yokupaka izikebhe olwandle
4.93(128 okushiwo abanye)
4.93 · 128 okushiwo abanye
Eduze uzoba neposi, isitolo esincane sakwa-U, abalimi abaningi bezimakethe, abathengisi bezinhlanzi, ikhemisi, odokotela abaningi, odokotela bamazinyo, odokotela bezifo zomzimba ... i-CHU 5 imizuzu ngemoto, ama-pizza, ukudla okulula, izindawo zokudlela, isonto elihle, ithempeli lamaShayina, isiteshi sokuqasha amabhayisikili kagesi (bona izithombe) ... kanye nehhovisi lezivakashi ukuhamba imizuzu embalwa ...
Siyatholakala nganoma yikuphi ukushintshana nge-imeyili, i-sms noma ucingo. Sizojabula ukuhlangana nawe futhi sixoxe nge-Reunion Island kanye nohambo lwethu olufanele. Sikhuluma isiNgisi nesiJalimane.